Facilis သည် IBC2015 @ Shared Storage နှင့် Asset Tracking အသစ်ကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2015 IBC ပြရန် » Facilis စျေးသစ် Shared သိုလှောင်မှုနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုခြေရာကောက် @IBC2015!
Facilis စျေးသစ် Shared သိုလှောင်မှုနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုခြေရာကောက် @IBC2015!
မှာရုပ်ရှင်, အသံလွှင့်ခြင်းနှင့်အသံအမြင်အာရုံစျေးကွက်များအတွက်ပြောင်းလဲနေသောလုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းချက်တစ်ခုအရေအတွက်ကမိတ်ဆက်လိမ့်မည် IBC2015! အဆိုပါ IBC2015 ပစ်လွှတ်၏မီးမောင်းထိုးပြ / ကြေညာချက်များကို Adobe နဲ့သမဝါယမမိတ်ဖက်သဘောတူညီမှုဖြစ်လိမ့်မည်, Telestream, VSN ၏ပေါင်းစည်းမှုရိုးရှင်းလိမ့်မည်သည့်နှင့် Marquis အသံလွှင့် Facilis သင့်ရဲ့စက်ရုံစစ်ဆင်ရေးသို့ထုတ်ကုန်။
ဒီတော့ IBC2015 မှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်အသှငျအပွငျမှအောက်ပါအထင်ကြီးထုတ်ကုန်လိုင်းဖွစျလိမျ့မညျအောင် Facilis:
TerraBlock 24D / HA Hybrid ကို Array ရိုးရာ 8TB SATA ၏ပိုကြီးတဲ့ drive ကိုအုပျစု 4TB သို့မဟုတ် 72TB ပေါင်းစပ်စွမ်းရည်များအတွက်မောင်းအတူ 80 တစ် drive ကိုအုပ်စု, Ultra-မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အဘို့အ SSDs x ပါဝင်သည်။ အဆိုပါ 24D / HA တူညီသည့်စနစ်အတွက်စကေးထွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်အယ်ဒီတာအဖွဲ့အတူ compressed လုပ်မထားတဲ့ 4K ပြီးများအတွက်လိုအပ်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကယ်လွှတ်ခြင်းငှါဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အဆိုပါ TerraBlock ရဲ့ Virtual Volume ကို system ကိုအသုံးပြုခြင်း, စီမံကိန်းကို-based SSD ကိုနှင့် HDD ခွဲတမ်းအမျိုးမျိုးသောပုံစံနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ယင်ကောင်အပေါ်နေသူများကဖန်တီးနိုင်ပါသည်။
TerraBlock 8D တစ်ခု 8-drive ကိုဖြစ်ပါတယ်, 16TB turnkey အကြောင်းအရာဖန်တီးမှုစနစ်။ ကဲ့သို့ Facilis'' ပိုကြီးတဲ့ဆာဗာများ, ဒီ 2U ထိန်သိမ်း mountable ဆာဗာပေါင်းစပ် Facilis ကို virtual အသံအတိုးအကျယ် workflow နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအတူဝေမျှ File System ။ အဆိုပါ 8D41GbE ဆိပ်ကမ်း x နှင့် Fiber Channel ကိုနှင့် 10Gig အီးဆက်သွယ်မှုကိုထောကျပံ့ဖို့အဆင့်မြှင့်နိုင်ပါသည်ပါဝင်သည်။ အဆိုပါ TerraBlock 8D အဆိုပါလုပ်ငန်းအသွားအလာလိုအပ်ချက်တိုးလာအဖြစ် TerraBlock ရဲ့နောက်ထပ်ချိတ်ဆက်ပြီးတိုးချဲ့နိုင်ပါသည်။
Facilis FastTracker အဆိုပါအတွင်းအများအပြားမီဒီယာအမျိုးအစားများ, ရှာဖွေပြုစုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်မှာပြည့်စုံသောလျှောက်လွှာဖြစ်ပါသည် Facilis DPX နှင့် TARGA ပုံရိပ်ကိုပာနဲ့အတူအားလုံးအဓိက QuickTime, MP4 နှင့် MXF ကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများအပါအဝင် TerraBlock Shared သိုလှောင်မှုစနစ်, အနည်းငယ်အမည်ကိုရန်။ ဤသည်လွယ်ကူသော-to-အသုံးပြုမှုကိုစနစ်ကထုံးစံ metadata ကိုမှတ်သားခြင်း, catalog အသုံးပြုသူခွင့်ပြုချက်, "Boolean" ရှာဖွေရေးစွမ်းရည်နှင့် incremental indexing လုပ်ဆောင်ချက်ကိုပါဝင်သည်။
"ဒီထုတ်ကုန်အသစ်တွေဖောက်သည်တုံ့ပြန်ချက်တစ်ခုတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ကြပြီးအမှန်တကယ်ဖောက်သည်လိုအပ်ပါတယ်တွေ့ဆုံရန် - တစ်ပြိုင်တည်းပါအယ်ဒီတာအဖွဲ့နိုင်စွမ်းတဲ့စနစ်ကနေနှင့် Workflows ပြီး, သူတို့ကိုအသုံးပြုဖို့မီဒီယာ၏ terabytes ကိုခြေရာခံရန်လွယ်ကူသောလမ်းနှင့်သေးငယ်များတွင်တပ်ဖြန့်များအတွက် entry-level စနစ် workgroups, " ဂျိမ်း McKenna, စျေးကွက်မှာ VP commented Facilis"ထိုနည်းတူစွာပင်အရေးကြီးသောသည်အခြားဦးဆောင်သည့်နည်းပညာရောင်းချသူနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဖက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အထီးကျန်မှုတွေအတွက်လည်ပတ်ကြဘူး - ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များနှင့်စနစ်များကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့သမဝါယမဖောက်သည်များအတွက်သူတို့ရဲ့အမြင့်ဆုံးအလားအလာမှာအလုပျလုပျဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ထုတ်ကုန်ကို enable ကြောင်းသေချာစေရန်ဖြစ်ပါသည် "။
Check-Out ယာကုပ် McKENNA နှငျ့ကြှနျုပျတို့၏ကိုယ်ပိုင် Ryan SALAZAR, စျေးကွက်မှာ VP Facilis!
ထုတ်လွှင့် Beats လူတွေ့မေးမြန်းခန်းအထူး!
ဘယ်နေရာမှာမဆိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့, ဧည့်သည်များအတွက် IBC2015 မှ Facilis တဲ 7.C10 volumes ကိုနှင့် workgroups အသစ်အပေါ်တွင်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှု features တွေလည်းပါဝင်သည်သော TerraBlock ဆော့ဖ်ဝဲရေကြောင်းဗားရှင်း 6.5 တွေ့မြင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ အင်္ဂါရပ်များပါဝင်သည်: Cascading Volumes ကိုဒေတာအားလုံးရွေ့လျားသို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းမရှိဘဲ, မျိုးစုံ drive ကိုအုပ်စုများနှင့်ဆာဗာများအကြားသိုလှောင်မှုစွမ်းရည်၏ချောမွေ့စွာချဲ့ထွင် enable ။ Windows ကိုကြီးထွားလာဖိုင်မှတ်တမ်းပံ့ပိုးမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တစ်လျှောက်, ဖမ်းခြင်းနှင့်အန်ကုက်လုပ် Automation ထည့်သွင်းကူညီပေးသည် Windows ပေါ်မှာလူကြိုက်များပြင်ဆင်ရန်-စဉ်အတွင်း-စားသုံးမိ Workflows နှင့်ဝသကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ် OSX ။ တိုးမြှင့်အသုံးပြုသူများနှင့် Volume ကို 250 အထိရေတွက်ယင်းမှတဆင့်မျှနှုန်း-ထိုင်ခုံအခကြေးငွေနှင့်အတူ Multi-Platform ကိုအသုံးပြုသူများကချိတ်ဆက် Facilis Shared File System နဲ့ 1000 ဖို့ Volume ကိုရေတွက်အတွက်တိုး။
အကြောင်းအရာ Facilis နည်းပညာ
2003, မက်ဆာချူးဆက်-အခြေပြုခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Facilis နည်းပညာ Inc ကဒီဇိုင်းများနှင့်ရုပ်ရှင်, ရုပ်မြင်သံကြား, ပညာရေးနှင့်အော်ဒီယိုပုံရိပ်ယောင်စျေးကွက်များတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင် post ကိုထုတ်လုပ်မှုနဲ့ content ဖန်ဆင်းခြင်းပညာရှင်များအဘို့အတတ်နိုင်, High-စွမ်းရည်, turnkey shared သိုလှောင်မှုနဲ့သိမ်းဆည်းဖြေရှင်းချက်တည်ဆောက်။ ၎င်း၏ထုတ်လုပ်မှု-သက်သေပြဖြေရှင်းချက်လွယ်ကူဖန်တီးမှုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပူးပေါင်းနှင့်ပိုပြီးထိထိရောက်ရောက်လုပ်ကိုင်ဖို့အတှကျအောင်မြန်ဆန်ခြင်းနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်ကြသည်။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၏အရွယ်မှာနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်း-စံဖန်တီးမှုဖြေရှင်းနည်းများနှင့်သဟဇာတ, FacilisBoutique, Mid-အရွယ်သို့မဟုတ်ကြီးမားသော - - '' ထုတ်ကုန်မဆိုစတူဒီယိုပတ်ဝန်းကျင်သို့ချောမွေ့စွာရောနှောနေခြင်းနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းထက်ပို 2000 အဆောက်အဦထဲမှာ installed ပါပြီ။
4K ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ post ကိုထုတ်လုပ်မှု တီဗီနည်းပညာ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2015-08-17
ယခင်: Professional ကကြိုးမဲ့စနစ်များ '' ကြိမ်နှုန်းညှိနှိုင်းရေးတွင် AT & T က Park မှာမျှော်လင့်ခြင်း၏ယောလ Osteen ရဲ့ညများအတွက်ခေါ်ရန်အဖြေများ
နောက်တစ်ခု: HBO Mini ကို-စီးရီးများအတွက်စက်ကိရိယာများ '' 970 Capture အပူပေး Audio အသံငါ့ကိုတစ်သူရဲကောင်းပြရန်